दिनहुँको आ’न्दोलन र भी’डभाडले संक्रमण भ’यावह हुन सक्ने – Enepali News
June 13, 2020 379
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा।शेरबहादुर पुनले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले भौतिक दूरी कायम गर्नु नै अहिलेको उ’पयुक्त विकल्प भएको बताए । उनका अनुसार भौतिक दूरी कायम गर्न सकियो भने संक्रमण प्रसारण हुने सम्भावना कम रहन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्चतम बिन्दुतर्फ गइरहेकाले जमघट र भी’डभाड गर्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चे’तावनी पुनले दिएका छन् ।
Prevआज ओली सरकारले ठुलो निर्णय लिंदै ! सर्वसाधारणमा छाउने छ खुसियाली !
Nextराष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले दशको समृद्धिमा फड्को फड्को मार्छ : पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा